Kismaayo News » Soomaaliya oo hadda kadib hawadeeda maamulaysa
Soomaaliya oo hadda kadib hawadeeda maamulaysa
Kn: Dawladda Soomaaliya ayay u suuro gashay inay markii ugu horaysay mudo 27 sano ah dib ula soo wareegto maamulista iyo maaraynta hawadeeda oo ay ka soo gali doonto dakhli ku kacaya malaayiin doolar sanad kasta.
Hawada Soomaaliya oo laga maamulayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya tan iyo intii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ayaa hindisaha ah in dalku dib ula soo wareego waxaa lahaa dawladdii Xasan Sh. Maxamuud ayadoo ugu danbayn ay ku guulaysatay dawladda Farmaajo inay soo wareejiso. Ha’addii gacanta ku haysay hawada Soomaaliya waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay inaysan soo wareejin maamulista hawadeena ayadoo markasta dhaqaale badan oo laaluush ah ku harqinaysay siyaasiyiin iyo wasiiro Soomaali ah. Xukuumaddii Saacid wasiirkeedii warfaafinta, isgaarsiinta gaadiidka cirka iyo dhulka, Cabdullahi Cilmooge Xirsi ayuu ahaa ninkii soo dhameeyay ee sixiixooda lahaa soo wareejinta hawada, dib u hawlgalinta boostada iyo shirkadda Somali Airline oo 5 diyaaradood usoo dhameeyay, laakiin wasiiradii kadanbeeyay ayaa waqtiga u dheereeyay ayagoo qaarkood lagu sheegay inay lacago laalush ah ka qaateen.
Nasiib wanaag maanta ayay si rasmi ah ugu soo wareegtay gacanta dawladda Soomaaliya kadib markii wasiirka hadeer xilka haya, Maxamed Cabdullahi Salaat uu xil iska saaray inuu dhamaystiro soo wareejinta hawada. Waxaana xarigga ka jaray xafladdii daahfurka madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Lama sheegin in sidoo kale dawladda lagu soo wareejiyay lacag boqol malyuun kor u dhaaftay oo baaqi ka ahayd lacagihii laga qabtay diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya taasi oo ururaysay tan iyo intii dalku burburay.
Faanoole fari kama qodnee, wali waxaa u dhiman dawladdu inay sidan oo kale si dhab ah ula soo wareegto Badda iyo Barriga Soomaaliya. Badda oo laga ciribtiro kaluumaysatada iyo maraakiibta kale ee daldalanaya khayraadka badda ama kuwa suntan ku qubaya, sidoo kalana dhanka barriga waxaa laga rabaa inay canaasiirta nabaddiidka ka buufiyaan, isu socodka magaalooyinkuna uu noqdo mid caadiya.